Naqshadda Mareegta 2022 - DhageystayaashaGain
Naqshadaynta Mareegaha aasaasiga ah
SHIRKADDA NAQLADA WEBSIGN
AudienceGain waa shirkad naqshadeeye shabakad caan ah oo sumcad leh oo ku takhasustay bixinta adeegyada naqshadeynta mareegaha xirfadlayaasha ah, heerarka SEO iyo ku habboonaanta mobilada. Shirkaddu waxay leedahay koox IT firfircoon, fikir hal abuur leh, waayo-aragnimo sannado badan oo dhinaca tignoolajiyada macluumaadka ah. AudienceGain had iyo jeer wuu maqlaa oo fahmaa dhibaatooyinka macmiil kasta, kaas oo shirkadu ay bixin doonto xalalka ugu fiican si ay uga caawiso macaamiisha inay si buuxda u hubiyaan tayada qiimaha ugu jaban.
Waa maxay Naqshadda Mareegta?
Naqshadeynta mareegaha waa isku-dar shaqo oo ka timid naqshadeynta sawirka, nuxurka iyo soo bandhigida goobta mareegaha si loogu dhejiyo macluumaadka shaqsiyaadka, ururada iyo ganacsiyada internetka oo dakhli badan laga helo. iyada oo loo marayo helitaanka macaamiisha suurtagalka ah ee internetka ee mareegaha.
Websaydhku waa sawirka, astaanta, iyo wejiga ganacsi ee internetka, markaa dhisidda mareegaha waa shaqo muhiim u ah shakhsi ama ganacsi si ay u kordhiyaan summadooda oo ay taageeraan iibka internetka.
Faa'iidooyinka naqshadeynta shabakadda
Xilligii tignoolajiyada 4.0, la'aanta mareegaha waxay ku adkeyn doontaa shirkaddaada ama ganacsigaaga inay la tartanto tartamayaasha kale. Gaar ahaan marka xaaladda cudurku ay adag tahay, wax iibsiga onlaynka ah ayaa noqday mid la taaban karo si ka badan sidii hore. Inaad haysato shabakad meherad onlayn ah waa isbeddel lama huraan u ah ganacsigaaga.
Adeegga naqshadeynta websaydhka xirfadlaha ah waa inuu ka caawiyo macaamiisha inay siiyaan aragtida qaab-shaqeedka xirfadeed ee shirkadda, dukaanka, ganacsiga, marka lagu daro, isticmaalayaashu waxay leeyihiin aragti marka ugu horeysa marka ay booqdaan websaydhka ganacsiga.
Bixinta mawduucyada WordPress tayada leh ee warshado kala duwan, fududahay in la rakibo, naqshadeynta heerka SEO, oo la jaan qaada dhammaan qalabka.
Adeegyada SEO ee tayada leh, AudienceGain waa shirkad hormuud ah oo bixisa adeegyada SEO ee ganacsiyada.
Ka caawinta inaad kaydiso wakhti iyo dadaal si aad u daryeesho mareegahaaga, cusboonaysiiso waxa ku jira ama samaynta tafatirka aasaasiga ah. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad nagu kalsoonaato
HORUMARINTA XAWAARAHA SHABEEBKA
Kordhi xawaaraha Google PageSpeed ​​​​Insights. U isticmaal si aad u dedejiso boggaaga WordPress, u wanaajiso qiimaynta SEO, oo aad u yarayso dalabyada Google Ads.
Hay'adda SEO iyo Adeegyada Dhismaha Bulshada waxay kaa caawinayaan inaad kordhiso kalsoonida mareegahaaga iyo kor u qaadida darajooyinka ereyga muhiimka ah si dhakhso leh oo badbaado leh.
HOSTING / VPS QAYBAHA RAQIISKA AH
Bixinta Hosting, VPS Unlimited, tayo sare leh oo wata SSD drive, helitaanka xog degdeg ah si aad u abuurto dhismo aad ku wanaajiso Website-kaaga.
Xirmooyinka Adeegga Naqshadaynta Mareegaha Xirfadlayaasha
Waxaan bixinaa xirmooyin naqshadeynta shabakada qiimaha tartanka suuqa.
Naqshad si waafaqsan template ee dukaanka interface
Magaca domainka bilaashka ah .com .net
Amniga SSL: Haa
Hosting bilaash ah oo leh awood sare
Luqadda: 1 Luuqad
Sii 5 maqaallo - 10 alaab
Naqshadaynta bilaashka ah ee 2 banner ee xirmada $200
Ku wareejinta koodhka isha
Ka jawaabaya: Bandhig PC / Tablet / Telefoon
La talinta Suuqgeynta Bilaashka ah
Dammaanad: Weligeed haddii la isticmaalayo AudienceGain Hosting
Nakhshad si waafaqsan template-ka taageera tafatirka
Magaca domainka bilaashka ah .com .com.vn
Luuqadaha: 2 luuqadood
Sii 8 maqaallo - 20 alaab
Bixi 3 nashqadaha banner
Naqshad gaar ah marka la codsado
Magaca domainka bilaashka ah .vn .com.vn
Sii 10 maqaallo - 30 alaab
Bixi 4 nashqadaha banner
NIDAAMKA SHAQADA EE SHIRKADDA NAQABAYSIGA SHABEEBKA EE DHAGAYSIGAIN
AudiENCEGAIN had iyo jeer waxay hagaajisaa habka maalinba maalinta ka dambeysa si shaqadu si habsami leh ugu socoto si loo badbaadiyo kharashaadka macaamiisha intii suurtagal ah. Waxaan bixinaa adeegyada naqshadeynta shabakadda adduunka oo dhan.
Hel codsiyada oo la tali macaamiisha
Soo hel ujeedada macmiilka marka aad samaynayso shabakad, u dir muunadda tixraaca interface oo la tali interface ku habboon.
Xir interface-ka shabakadda, xigasho oo dir qandaraaska
Ka dib marka macaamiishu ogolaado template interface, ka dibna xigasho oo u dir qandaraaska macaamilka si uu u tixraaco.
Saxiix heshiis si aad uga hesho 50% hormaris macaamiisha
Labada dhinac waxay ku heshiiyaan shuruudaha qandaraaska, sii wadaan inay saxeexaan oo ay helaan 50% lacagta horumarinta shabakadda ee macaamiisha.
Samee horumarinta shabakada qandaraaska
U qaabee mareegaha si waafaqsan wakhtiga heshiiska oo tus natiijooyinka hadba sida uu horumarku u socdo. Tijaabi oo gudbi natiijooyinka ugu dambeeya
Imtixaanka oggolaanshaha iyo tilmaamaha sida loo isticmaalo mareegaha
Ka hel jawaab celinta macaamiisha, tafatirka dhamaystiran iyo aqbalaadda. Tilmaamaha isticmaalka mareegaha.
Damaanad qaadka iyo daryeelka mareegta inta lagu jiro isticmaalka adeegga
Dammaanad - daryeel - tafatirka aasaasiga ah ee macaamiisha haddii ay ka go'an tahay martigelinta muddada dheer.
Qaababka isku xirka shabakada ee warshadaha
Iibinta Mawduuca WordPress
Ganacsiga WordPress Theme
Safarka - Hotel WordPress Theme
Mawduuca WordPress ee Waxbarashada
Qurxinta - Mawduuca Quruxda WordPress
Mawduuca WordPress Gudaha - Dhismaha
Cunto - Daawo WordPress Theme
SU'AALAHA KU SAABSAN ADEEGYADA NAQJEEDKA SHABEEBKA
Intee in le'eg ayay qaadataa in lagu dhammaystiro naqshadaynta degelka ee AudienceGain?
Naqshadaynta mareegaha si loo dhamaystiro waxay caadi ahaan qaadataa ilaa 15-30 maalmood iyadoo ku xidhan xajmiga, tirada luqadaha iyo kakanaanta alaabta.
Intee ayay jirtaa muddada dammaanadda marka la isticmaalayo adeegga naqshadaynta mareegta AudienceGain?
Adeegga dammaanadda mareegaha waxa uu leeyahay muddo 01 sano ah laga bilaabo taariikhda mareegaha la wareejiyay. Baaxadda dammaanadda waxaa ka mid ah hagaajinta khaladaadka shabakadda haddii ay jiraan khaladaad marka la barbar dhigo sifooyinka naqshadeynta, khaladaadka soo baxa inta lagu jiro isticmaalka, iyo amniga bogga.
Naqshadaynta mareegaha AudienceGain ma leeyahay qaansheegad & qandaraas?
Arrin ay qaybo badan xiisaynayaan ayaa ah in adeega naqshadaynta mareegta la soo dalacsiiyay. Sababta loo naqshadeeyay website-ku waxay ku jirtaa liiska adeegyada softiweerka ah ee aan ku jirin moms, markaa arrinta qaansheegyada macaamiisha looma ogola inay ka jaraan wax soo saarka ganacsiyada. Waxayna AudienceGain xaqiijin kartaa in, marka la naqshadeynayo degelka ama la isticmaalayo adeegyada degelka kale, macaamiisha la siin doono qaansheegyada VAT iyo qandaraasyada.
Ma bedeli karaa interface-ka cusub inta lagu jiro isticmaalka? Ma jirtaa taageero loogu talagalay tafatirka ama ku darista shaqeyn?
Inta lagu jiro isticmaalka, haddii aad u baahan tahay inaad beddesho interface-ka ama aad wax ka beddesho hawlo badan, AudienceGain waxay ku taageeri doontaa qiimaha ugu fiican.
Iyada oo leh dhammaan waayo-aragnimada, dadaalka iyo xirfad-yaqaannimada, AudienceGain waxay si kalsooni leh u siisaa ganacsiyada xalka ugu fiican si loo sameeyo deisgn deisgn deisneed xirfad leh.
© 2016-2022 Dhegaystayaasha - Xalka Abuuraha Mawduuca